Cala Moraig, iray amin'ireo morontsiraka tsara indrindra eto Costa Blanca | Vaovao momba ny dia
Luis Martinez | | España, tora-pasika
Cala Moraig dia iray amin'ny morontsiraka tsara tarehy indrindra ao Costa blanca. Any amin'ny faritra Alicante any Marina Alta ary, indrindra indrindra, ao amin'ny Poble Nou de Benitachell, eo anelanelan'ny Jávea sy Moraira.
Ity cove kely amin'ny fasika fotsy sy rano madio kristaly ity dia miseho ao ambadiky ny fametrahana azy Puig de la Llorença massif, izay mianjera amin'ny morontsiraka mamorona hantsam-bato hatrany amin'ny zato metatra ny haavony izay misy, morontsiraka kely. Raha te hahafantatra bebe kokoa momba an'i Cala Moraig ianao dia manasa anao hanohy hamaky.
1 Zavatra tokony hatao any Cala Moraig
1.2 Làlana fitsangantsanganana
2 Ahoana no ahatongavana any Cala Moraig
3 Ny manodidina an'i Cala Moraig
Zavatra tokony hatao any Cala Moraig
Ny zavatra voalohany tokony ho fantatrao momba an'i Cala Moraig dia ny zorony havia dia fomban-drazana. Saingy, zava-dehibe kokoa ireo zavatra azonao atao raha mitsidika an'ity torapasika mahafinaritra ity ianao.
Ny faritra dia mety aminao antsitrika sy snorkeling. Ireo vatolampy izay mianjera eny amoron-dranomasina dia miforona ao anaty rano misy karazan'olona samy hafa.
Ao anatin'ireo velaran-tany feno vatolampy, misongadina ny manintona an'i Cala Moraig. Momba ny antso io Cova dels Arcs, izay misy lavaka na ety ambony na anaty rano. Io dia vokatry ny rafitry ny rano fanondrahana karst napetraky ny ranomasina teny ambony vatolampy ary ny ampahany tsara aminy dia nalentika tokony ho 6000 miliara taona lasa izay.
Fantatra fa efa fantatry ny olombelona hatramin'ny nahatongavan'ireo mpifindra monina voalohany tany an-toerana. Taty aoriana dia natao fialofana ho an'ireo tantsambo izy io, na dia ho hita indray aza rehefa manomana ny fiasan'ny arabe izay mampifandray an'i Poble Nou de Benitachell amin'ireo tanàn-dehibe ao amin'ilay faritra.
Manome anao ny ivelan'ny Cova dels Arcs karatra paosin'ny masoandro mody mahafinaritra. Ary, ao anatiny, ny faritra fantatry ny lava-bato malaza indrindra Efitra Immersionists, antsoina koa hoe "Star Window." Avy any ianao dia afaka miditra amin'ny efitrano malalaky midadasika izay mifandray mivantana amin'ny ranomasina misokatra.
Na izany aza, alohan'ny hidiranao ao anaty lava-bato dia mila mitandrina ianao. Voalohany indrindra, tsy tokony ataonao izany rehefa avo ny onja ary mihetsiketsika ny ranomasina satria mety hahatonga anao hianjera amin'ny vato izany. Ary koa ary faharoa, malama ny tampon'ilay lavaka ary tsy sarotra ny hianjera. Na izany na tsy izany, izany dia a fahagagana voajanahary izay heverina ihany koa ho ny fivoahan'ny rano ambanin'ny tany lava indrindra any Espana rehetra.
Etsy ankilany, avy any Cala Moraig dia misy làlana fitsangantsanganana sy bisikileta maromaro izay mamakivaky ilay faritra voatonona etsy Puig de la Llorença, antsoina koa hoe Cumbre del Sol. Misongadina eo amin'izy ireo ilay mampiray an'i Abiar amin'i Calistros, izay mamakivaky ny faritry ny fambolena voaloboka ary mampiseho anao ny fananganana nentim-paharazana an'ny faritra antsoina hoe riurau, izay nitazomana ireo voaloboka. Mifarana amin'ny faritra fialamboly ao amin'ny tanàna voalohany noresahinay taminareo.
Miaraka amin'ity zotra ity, izay azonao atao amin'ny tongotra na amin'ny bisikileta no anananao an'ny Penya-Segats, izay ny tena manintona anao dia ny fijerena anao ireo lava-bato eny amorontsiraka. Ary mitovy ny an'ny Moraig diso, izay manana sanda ara-jeolojika avo. Fa ny lalana izay hahagaga anao indrindra dia ny fiantsoana Làlan'ny hantsana, izay manaraka ny lalana SL-CV 50, voamarika ary manana fomba fijery marobe.
Ahoana no ahatongavana any Cala Moraig
Ny làlana ihany no ahatongavana any Cala Moraig. Tsy maintsy mandeha ianao CV-737 ary raiso ny lalana mihodina mankany Fandraisana an-tanàn-dehibe Cumbre del Sol. Rehefa avy nandalo an'io ianao dia hahita toeram-piantsonana eo amin'ny tapany ambony amin'ny cove izay tsy maintsy hipetrahanao ny fiaranao ary hanao ny ambiny amin'ny tongotra. Tsy dia ela loatra io, na dia tononina aza.
Ny manodidina an'i Cala Moraig
Etsy ankilany, aorian'ny andro iray eny amoron-dranomasina ao Cala Moraig, dia ho tianao koa ny hahafantatra ny manodidina. ny Marina Alta Alicante dia manana tanàna tsara tarehy sasany izay mendrika hitsidika anao. Haneho anao ny akaiky indrindra ny elakelainay izahay.
Ny zavatra voalohany tsy maintsy holazainay aminao momba ity tanàna ity dia, ao amin'ny faritry ny tanànany, manana coves tsara tarehy hafa toa ny ianao avy amin'ny Testos y avy amin'i Llebeig. Saingy manome anao tsangambato mahaliana koa izy io. Anisan'ireny, ny fiangonan'i Santa Maria Magdalena, natsangana tamin'ny taonjato faha-XNUMX tamin'ny fomba baroque. Ho fanampin'izany, manoro hevitra anao izahay hahita ny Oratory Jaime Llobell, namboarina tao amin'ny XIX.
Avy amin'ny fotoana iray ihany ny Town Hall ary antitra kokoa ny Portalet, izay iray amin'ireo vavahadin'ny rindrina medieval ary ankehitriny dia manome fidirana amin'ny kianjan'ny fiangonana.
Tena akaiky an'i Cala Moraig koa ity tanàna kely misy mponina manodidina ny XNUMX ity izay manana seranana tsara tarehy. Mikasika ireo tsangambato misy azy, ny lapan'ny, izay fiarovana mimanda amoron-tsiraka hiarovana ny faritra amin'ny fanafihan'ny jiolahin-tsambo.
Ity tanàna kely ity dia iray amin'ireo soso-kevitra indrindra amin'ity faritra amin'ny faritanin'i Alicante ity. Ho gaga ianao amin'ny isan'ny tsangambato ao aminy. Anisan'izany, ny setan'i tranobe sy lapa izay miasa ho foiben'ny sampana ao amin'ny University of Alicante.
Nasongadin'izy ireo ihany koa ny trano fivahinianana an'ny Ray Fransiskanina, nanomboka tamin'ny 1645; ny Lapan'i Torres-Orduña, tranon'ny kolontsaina ankehitriny; ny Fiangonan'ny Neo-Gothic ao La Purísima Concepción ary, ambonin'izany rehetra izany, ny silaka, tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary izay no trano tranainy indrindra ao an-tanàna.
Io no tanàna manan-danja indrindra amin'ny faritra ary arovan'ny Montgó massif, manodidina anao izay manana zaridaina voajanahary mahafinaritra. Amin'ny farany, afaka manakaiky kokoa ny Cape San Antonio, izay, miaraka amin'ireo hantsam-bato mahatalanjona, manome anao fahitana mahafinaritra an'i Costa Blanca.
Mikasika ireo tsangambaton'i Jávea, miavaka noho ny rehetra izy fiangonan'i San Bartolomé, natsangana tamin'ny taonjato faha-1931. Izy io dia mampifangaro ny toetra mampiavaka ny trano mimanda noho ny drafitra mahitsizoro sy ireo vodiny matanjaka miaraka amin'ny fahononam-pon'ny tempoly. Ho fanampin'izany, ny lakolosiny dia hita amin'ny toerana maro ao amin'ny faritra. Nanomboka tamin'ny XNUMX dia tsangambaton'ny artista nasionaly izy io.
ny fiangonana an'ny Our Lady of Loreto, izay ao amin'ny seranan-tsambo ary ny tampon-tranony dia manahaka ny vodi-sambo. Etsy ankilany, raha mankany Cape San Antonio ianao dia hahita ilay monasiteran'ny Virjin'ny anjely ary maromaro tilikambo fiambenana izay nifehy ny fahatongavan'ireo jiolahin-tsambo.
Ho fehiny, Cala Moraig Iray amin'ireo morontsiraka tsara tarehy indrindra eto Costa Blanca manontolo izy io. Manolotra anao fahagagana toa ny Cova dels Arcs. Saingy ny tanàna any amin'ny faritra dia mendrika ny fitsidihana anao. Tsy te hahalala an'ity zoron'ny ity ve ianao Faritanin'i Alicante?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » España » Cala Moraig
Fomban-drazana any Sina
Ahoana ny fomba fiakanjo any Maroc